Iindaba - Zingaphi iiplastiki "esizityayo" yonke imihla?
Zingaphi iiplastiki "esizityayo" yonke imihla?
Namhlanje iplanethi ibona ungcoliseko olubi kakhulu lweplastiki kunanini na ngaphambili. Kwintlanganiso yeNtaba i-Everest, iimitha ezingama-3,900 ezantsi koLwandle lwase China, phakathi kweArctic ice cap kwaye nasezantsi eMariana Trench ungcoliseko lweplastiki lukuyo yonke indawo.
Ngexesha lokutya ngokukhawuleza, sitya amashwamshwam atywinwe ngeplastikhi, sifumana iipasile ezingxoweni zeplastikhi zokuposa. Nokuba ukutya okukhawulezayo kusongelwe kwizikhongozeli zeplastiki. Ngokwe-Global News kunye novavanyo olwenziwe yiYunivesithi yaseVictoria, izazinzulu ziye zafumanisa ii-microplastics ezili-9 emzimbeni womntu kwaye umntu omdala waseMelika unokuginya amasuntswana ayi-126 ukuya kwi-142 e-microplasitc kwaye aphefumlele amasuntswana ayi-132 ukuya kwi-170 ngemini.
Ichazwe ngumfundi waseBritane uThompson, microplastic ibhekisa kwizikroba zeplastiki kunye namasuntswana anobubanzi obungaphantsi kweemicrometer ezintlanu. Ii-micrometer ezi-5 ziphindaphindwe kaninzi ukubhitya kunenwele enye kwaye akubonakali ngamehlo abantu.
Zivela phi ii-microplastics?
Ukusukela oko kwaveliswa iplastikhi ngenkulungwane ye-19, ngaphezulu kwe-8,3 yezigidigidi zeetoni zeplastiki eziye zaveliswa, phakathi kwazo, ngaphezulu kweetoni ezizigidi ezisi-8 ziphelela elwandle minyaka le ngaphandle kokulungiswa. Iziphumo: i-microplastics ifunyenwe ngaphezulu kwe-114 yezinto eziphila emanzini.
Izazinzulu kutshanje zenze uphando olubanzi ngaphezulu kwe-250 yeebhotile zamanzi eebhotile kumazwe ali-9 kwaye bafumanisa ukuba amanzi amaninzi aneebhotile anazo. Kwanamanzi empompo aneemicroplastics kuwo. Ngokweziko lophando laseMelika, phakathi kwamazwe ali-14 anamanzi empompo abephantsi kophando, i-83% yawo yafunyanwa ine-microplastics kuyo. Ungayichazanga eyokuhambisa kunye neye-bubble yeti kwizikhongozeli zeplastiki kunye neekomityi ezilahlwayo esiphantse sihlale sidibana nazo mihla le. Rhoqo kukho ukutyabeka kwePolyethylene eya kuqhekeka ibe ziincinci ezincinci.
Ayinakulindeleka loo nto! Kodwa akukho nzima ukuyiqonda. Ityuwa iphuma elwandle kwaye xa amanzi engcoliswe, ityuwa ingacoca njani? Abaphandi bafumene ngaphezulu kwamaqhekeza ama-550 ee-microplastics kwi-1 kg yetyuwa yolwandle.
Ecess Izinto eziyimfuneko mihla le emakhaya
Inye inyani yokuba ungakhange uqaphele kukuba i-microplastics inokuveliswa bubomi bakho bemihla ngemihla. Umzekelo, ukuhlamba iimpahla zepolyester ngomatshini wokuhlamba kunokukhupha ifayibha eninzi kwigumbi lokuhlanjwa. Xa ezo fayibha zikhutshwa emanzini amdaka, ziba microplastics. Abaphandi baqikelela ukuba kwisixeko esinabemi abasisigidi, itoni enye yefayibha eqaqambileyo inokuveliswa, elingana nesixa seeplastiki ezingama-150 000 ezingenakonakala.
Iintsinga ezingaphezulu kakhulu zinokuphelela kwiiseli zethu nakwizitho zomzimba, ezinokubangela izifo ezinobuzaza njengokufakwa ityhefu engapheliyo kunye nomhlaza.
I-Naturepoly izabalazela ukuvelisa ukutshintshwa okubolayo kweeplastiki. Sityalile imali kuphando kunye nasekuphuhliseni izixhobo ezisekwe kwizityalo ezifana nePLA, izinto zomoba. Sizisebenzisa ekwenziweni kwezinto eziyimfuneko zasekhaya njengebhegi yenkunkuma, ibhegi yokuthenga, ibhegi yengxowa, ukugoba isongelo, izixhobo zokusika ezilahlwayo, iikomityi, iindiza kunye nezinye iimpahla ezizayo.